Samurai Flash Apk Download Ho an'ny Android  | APKOLL
Samurai Flash Apk Download Ho an'ny Android 
Salama daholo, androany isika dia miaraka amin'ny lalao Android mahagaga izay fantatra amin'ny anarana hoe Samurai Flash Apk. Ny zavatra tsara indrindra amin'ity lalao ity dia satria tsotra dia tsotra, izay mampiavaka azy amin'ny lalao hafa rehetra. Afaka mandany fotoana kalitao amin'ity lalao ity ianao.
Mbola misy bebe kokoa ny manazava momba ity fampiharana ity, izay hozarainay aminareo rehetra ao amin'ireo fizarana etsy ambany. Ka raha te-hisintona an'ity rindranasa ity ianao dia tokony hahalala kely momba ny lalao alohan'ny hisintonana an'ity app ity. Mijanona miaraka aminay ary hizara izany rehetra izany izahay.
Topimaso momba ny Samurai Flash Apk
Izy io dia lalao Android Action maimaim-poana, izay tsy maintsy hamoahana ny mpanohitra anao amin'ny sabatra. Ny avatar dia mitazona sabatra amin'ity havia sy havanana ity. Amin'ny alàlan'ny famindrana ny rantsan-tànanao eo amin'ny efijery dia mila mandeha eny an-tsaha ianao ary manafika ireo fahavalonao.
Isaky ny famonoana olona dia hahazo isa ianao, izay hanampy amin'ny kaontinao. Misy fahavalo samy hafa miaraka amin'ny fitaovam-piadiana samy hafa, izay mety hamono anao. Noho izany dia mila miala amin'ny fitokonan'ny fahavalo ianao. Misy dingana efatra amin'ny ambaratonga tsirairay.
Amin'ny dingana telo voalohany dia hiatrika ireo mpanohitra na fahavalo mahazatra ianao, fa amin'ny dingana fahefatra dia mila miady amin'ny sefo ianao. Boss dia manana fitaovam-piadiana mahery vaika foana, izay afaka hamoaka anao haingana noho ny hafa. Amin'ny dingana voalohany dia ho mora vonoina ireo sefo raha ampitahaina amin'ny avo kokoa.
Sarintany na saha dia tena sarotra amin'izany Lalao 3D. Amin'ny ankapobeny, ny saha dia ao amin'ny faritra voafetra ahafahanao mivezivezy, fa raha mivoaka ny faritra ianao. Ho lavo ianao ary hahomby ny iraka. Noho izany, miezaha hifikitra amin'ny sarintany ary hifindra amin'ny sarintany mivoaka dia tsy safidy tsara.
Azo ampiasaina amin'ny avatar anao ny hoditra rehefa feno ny haavonao. Ny teboka haavon'ny haavony dia hanampy ny hoditra ary rehefa vita ny hoditra feno, dia azonao apetaka amin'ny avatar anao izany. Misy hoditra samihafa azonao vahana rehefa vita ny dingana samihafa.
Misy sabatra ao amin'ny magazay. Tsy maintsy mahazo isa ianao raha hividy sabatra. Ny sabatra samihafa dia manana loka samihafa, izay misy ao amin'ny magazay. Misy sabatra manintona sy mahavariana misy amin'ny vidiny lafo.
Ahitana doka, izay sosotra tanteraka. Somary manelingelina ihany fa misy tombony ihany koa ny doka. Afaka mahazo isa bebe kokoa ianao amin'ny fijerena doka mihoatra ny 10 seg. Fa raha tsy te hanao doka ianao dia misy safidy roa azonao atao hanampiana anao amin'izany.
Ny voalohany dia ny fandoavana ny Ads-blocker, manome $ 2.99 izy amin'ny fanakanana ny karazan-doka rehetra amin'ny kaontinao. Ny safidy faharoa dia ny fampiasana samurai flash Mod Apk, izay manolotra Ads-blocker maimaim-poana ary koa endri-javatra maro hafa.
anarana Samurai flash
Anaran'ny fonosana com.YummyGames.SamuraiFlash
Developer Ny sandan'ny anjara Supersonic Studios LTD
Endri-javatra lehibe amin'ny Samurai flash App
Misy ny sasany amin'ireo fiasa lehibe tiako hizara aminareo rehetra momba ity rindranasa ity. Azonao atao koa ny mizara ny zavatra niainanao aminay amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra aza misalasala mampiasa azy.
Ads-blocker amin'ny tsipika Mod
Ahoana no fomba hisintonana ny samurai Flash Apk?
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io, fa raha manana olana ianao amin'ny fisintomana azy avy any, azonao atao ihany koa ny misintona azy amin'ity pejy ity. Mila mikitika ny bokotra fampidinana ianao ary miandry segondra vitsy. Hanomboka ho azy ny fisintomana.
Samurai Flash Apk dia iray amin'ireo lalao tsara indrindra handaniana fotoana kalitao miaraka aminy. Noho izany, mijanòna ho azo antoka ao an-trano ary ankafizo ity lalao mahatalanjona ity. Aza adino ny mizara izany amin'ny sakaizanao, mitsidika hatrany ny Website, ho an'ny fampiharana mahatalanjona kokoa.
Sokajy Games, Action Tags Lalao 3D, Samurai Flash Apk, Samurai Flash App, Samurai Flash Mod Apk Post Fikarohana
Mitos Team Apk ho an'ny Android Download [2022 Update]
Ha Tunnel Pro Apk Download Ho an'ny Android 